Isbitaalka Sahlgrenska oo qeylo dhaan la xirriirta cudurka jadeecadda ka soo yeertay | Somaliska
Isbitaalka Sahlgrenska oo qeylo dhaan la xirriirta cudurka jadeecadda ka soo yeertay
Cisbitaalka guud ee Sahlgrenska Universitetssjukhuset ee magaaladda Göteborg ayaa waxaa ka soo yeertay qeylo dhaan la xirriirta cudurka jadeecadda, ka dib markii dhawaan u xaalad caafimaad oo deg deg ah u doontay ruux la runsan yahay inuu qabay cudurkaasi jadeecadda.
Bishan dabayaaqada ah 10-keedii ayaa lugu arkay cibitaalka ruuxaasi qaba cudurka jadeecadda, wixii intaa ka dambeeyeyna waxaa jira shaqsiyaad kale oo loo maleeynayo in ay cudurka qaadeen. Sidaasna waxaa saxaafadda u sheegay Anders Gologer oo u qaabilsan xagga is gaarsiinta isbitaalka Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Anders waxaa uu sheegay in haatan socdo baaritaan xoog leh oo la xirriira in shaqsiyaadka loo maleeynayo in cudurka uu uga yimid ruuxa tagay xarrunta gar gaarka deg dega ah ee Akut-ka. Cudurkan jadeecadda ee ka dilaacay magaaladda Göteborg ayaa maamulka isbitaalku sheegayaan inuuna aheyn mid xowli ku socdo, balse ay qorshe xoogan oo looga hortagayo in cudurkaasi faafo. Waxaana ay haataan bilaabeen ineey xirriiro la sameeyaan boqolaal ruux oo loo maleeynayo ineey ka ag dhawaayeen shaqsiyaadka cudurkaas qabay.
Birgitta Arnholm oo ah dhaqtaradda qaabilsan waaxda ka hortagga cuduradda faafa ayaa sheegtay in ay jiraan shaqsiyaad cudurka jadeecadda lugu arkay halka qaar kale oo badan baaritaan lugu hayo. Ugu dambeyntiina cudurkan ayaa haatan waxaa uu walaac geliyey qoysas badan oo ku sugnaa cisbitaalka carruurta ee Östra sjukhuset, oo ka mid ah isbitaaladda guud ee la isku yiraahdo Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Qoysas badan ayaana xirriiro lala sameeyey si baaritaan loogu sameeyo carruurahooda. Haddaba soomaalida Göteborg ayaa shabakadda Somaliska.com, ka codsaneeysa in ay feejignaan sameeyaan oo haddii shaki yimaado ay gaaraan goobaha caafimaadka si loo baaro lana siiyo tallaalka looga hortago.